Liverpool oo guul muhiim ah ka soo heshay kooxda Tottenham Hotspur oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
(London) 29 Jan 2021. Liverpool ayaa guul muhiim ah ka soo heshay kooxda Tottenham oo ay ku booqatay garoonka Tottenham Hotspur Stadium, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada 20-aad ee horyaalka Premier League.
Daqiiqadii 45-aad Roberto Firmino oo caawin ka helay saaxiibkiis Sadio Mane ayaa hoggaanka u dhiibay kooxda Liverpool, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0.
47 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Liverpool ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta waxaana 0-2 ka dhigay Trent Alexander-Arnold.
Laakiin daqiiqadii 49-aad Tottenham Hotspur ayaa la timid gool, kaddib markii uu 1-2 ka dhigay Pierre-Emile Hoejbjerg, waxaana goolkan ka caawiyay Steven Bergwijn.
Daqiiqadii 65-aad Sadio Mane ayaa hoggaanka u sii dheereeyay kooxdiisa Liverpool, kaddib markii uu caawin ka helay Trent Alexander-Arnold, wuxuuna dheesha ka dhigay 1-3.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-3 oo ay Liverpool kaga soo adkaatay kooxda Tottenham oo ay ku booqatay garoonka Tottenham Hotspur Stadium, Reds ayaa haatan ku jirta booska afaraad ee kala sareynta horyaalka.